Milateriga Turkiga Oo Beeniyay Inay Qorsheynayaan Afgambi Ka Dhan Ah Madaxweyne Erdogan | Somaliland Today
← Najat Belkacem: Adhi Jirtii Reer Marooko ee Noqotay Wasiirka Waxbarashada Faransiiska
Togdheer Oo Siweyn Looga Tageeray Murrashaxnimada Golaha Wakiilada Ee Saxafi Muniir Axmed Cigaal.+SAWIRRO →
(SLT-Ankara)Milateriga Turkiga ayaa si carro leh u beeniyay warar soo baxayay oo sheegayay inuu socdo qorshe la doonayo in lagu afgambiyo Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan oo muddo todobaad ku dhow dalka ka maqan.
Sida ay qoreen qaar ka mid ah Warbaahinta Turkiga ayaa baahiyay warar sheegaya suurta galnimada inuu dhaco afgambi milateri oo ka dhan ah Madaxweyne Erdogan oo ku sugan dalka mareykanka. War ka soo baxay Milateriga Turkiga ayaa waxba kama jiraan lagu tilmaamay wararkaas, isla markaana ay yihiin kuwo been abuur ah.
Sidoo kale Milateriga Turkiga ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaab ka dhan ah wararka aan salka laheyn, kaasoo niyada ka dilaya Ciidamada Milateriga.
Erdogan ayaa awooda siyaasada ku soo galay xilka Ra’iisul Wasaarenimada oo uu hayay tan iyo sanadkii 2003, kadib waxaa uu noqday Madaxweyne.
Sanadihii 1960, 1971 iyo 1980 ayaa Milateriga Turkiga waxay xukunka ka tureen dowladdo la soo doortay, sidoo kale sanadkii 1997 ayaa waxaa awood ku saareen Necemttin Erbakan, kasoo Ra’iisul Wasaaraha ahaa, horayna ula talin jiray Erdogan.
Taariikh ahaan Ciidamada qalabka sida ee Turkiga ayaa loo arkaa inay yihiin xoog siyaasadeed oo awood badan leh, isla markaana xukunka ka tuuri kara dowladaha ay u arkaan inay wiiqayaan mabda’yada calmaaniga ee uu aas aasay Mustafa Kemal Ataturk, kaasoo ay iminka ku dhaqanto Jamhuuriyada Turkiga ee hada jirta.
Receb Tayyib Erdogan ayaa wax badan ka bedelay awoodii ay lahaayeen Ciidamada Milateriga Turkiga, isagoo tallaabooyinkaas u maray meel marinta sharciyo badan oo is xig xigay, kuwaasoo la doonayay in lagu sugo daacadnimada ciidamada.